Mark Gurman: Ma jiri doono jiil labaad AirPods Max | Waxaan ka socdaa mac
Mark Gurman: Ma jiri doono jiil labaad AirPods Max
Waxay u muuqataa taas ma jiri doono jiil labaad AirPods Max. In kasta oo ay umuuqato in Apple go’aansatay inay soo saari doonto midabyo cusub oo qalabkan ah. Iyadoo la tixgelinayo in iMac uu horey u lahaa midabbo, AirPods Max sidoo kale, mustaqbalka waxaa jira hadal ah in MacBook Pro uu ku imaan karo midabbo kala duwan iyo in dhammaan qeyladhaan ay billaabeen Apple Watch, anigu la yaabi maayo intaas oo dhan ugu dhakhsaha badan illaa calaamadda Apple ay dib ugu noqotay xilliyadii sannadihii 1976-1998.
Xanta uu bilaabay falanqeeyaha Mark Gurman oo ka socda Blommberg, Taas oo jidka inta badan sax ah, waxay ka digayaan awood la'aanta haysashada jiilka labaad ee AirPods Max suuqa. Haa waan arki lahayn midabyo cusub laakiin ma aanan lahaan lahayn astaamo cusub ama cilad-hagaajin. Kuma jirto qorshayaasha Apple inay sii daayaan cusbooneysiin.
Hadda, ma loo baahan yahay? Hagaag, mabda 'ahaan waxay umuuqataa sidaas. Ugu horreyntii, waxaan leenahay dhibaatada uumiga 'AirPods Max' ee aaladda 629 euro. Waxaan haynaa qaar adeegsadayaasha ah oo ka cabanaya nolosha batteriga iyo ugu dambeyn iswaafaq la’aanta Apple Lossless ka Apple Music. Sidaa darteed, aniga oo tixgelinaya duruufahaas, waxaan si adag u aaminsanahay in dib-u-eegis lagu sameeyo badeecadda loo baahan yahay sidaa darteedna nuqul labaad oo aan aaminsanahay la bilaabi doono. laakiin bartamihii 2022.
Waxa Mark u leeyahay Bloomberg waa waxa jiri doona waa daahfurka midabyo cusub Haatan waxaan ku heynaa cirro, qalin, cagaar, cirka buluug iyo casaan, in kasta oo suufka la is weydaarsan karo u oggol yihiin isku-dhafnaan midabyo badan leh. Taas oo aan layaab aheyn marka loo eego isbeddelka midabada leh ee sii deynta ugu dambeysay ee shirkadda. Laakiin waxaan u soconaa in dadka isticmaala ay rabaan midabyo, haa laakiin sidoo kale waxay rabaan qalab 629 euro ah inuu si fiican u shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mark Gurman: Ma jiri doono jiil labaad AirPods Max
Taxanaha Apple Watch 3 wuxuu leeyahay maalmihiisa lambar
MacBook Pro loogu talagalay WWDC, macOS rasmi ah 'Big Sur 11.4', iyo in ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac